Biirtay PA380 VC la pack ku milmaan A350, suurto gal ah?
Su'aal Biirtay PA380 VC la pack ku milmaan A350, suurto gal ah?
1 sano 10 bilood ka hor #481 by JanneAir15
Hello! Waxaan soo bixi A350 ku milmaan pack iyo waxaan u maleynayaa in A350 ugu fiican ee aad ka heli kartaa FSX hadda, laakiin waxaa jira hal dhibaato oo weyn, waayo, taasu weli isku A320 / A330 sida qol iyo waxaan u maleeyey in ay suurto gal tahay inay la midowdo a VC ka Project Airbus A380 in diyaarad this. Taasi waa sababta VC A380 ah sababtoo ah waa ugu dhow in aan ka heli kartaa (sababtoo ah ma jirto A350 Guddiyada). Sidaas aad iga caawin kara arrintan? Dhab ahaanbaan Imtixaanay Casharrada qaar ka mid ah, laakiin aan waxba.
Halkan ku milmaan A350 ah:
1 sano 10 bilood ka hor #484 by Gh0stRider203
Aan ku sameeyey a raadinta google deg deg ah sida aan daacad ah marna waxaas samaysay, iyo wuxuu u soo baxay oo la this video. Waxaan rajaynayaa in ay kaa caawinaysaa in!
1 sano 10 bilood ka hor - 1 sano 10 bilood ka hor #485 by JanneAir15
Waxaan hore u daawaday video oo isku dayay hababka balse ma aysan soo shaqeeyay. Taasi waa sababta aan halkan weydiinaya.
Haa waxaan soo gaarnay heer ah in ay suurto gal ahayn. Waxaan calaamadeeyey files iyo wax kasta oo loo baahan yahay, laakiin waxaa suurto gal ahayn in kasta oo ay tahay MDLXMDLH oo video ah ayaa sheegay laakiin waxaan imtixaannay wax kasta oo midkoodna shaqeeya si aan runtii ma oga waxa la sameeyo. Laakiin haddii qof ka dhigi kara markaas ka shaqeeya fadlan halkan sheegto sida.
Last edit: 1 sanad 10 bilood ka hor by JanneAir15.